रोचक फे’सबुक धेरै चलाउदा बढ्छ पति-पत्नी बीच मनमु’टाव
नेपाल अनलाइन पत्रिका | काठमाडौं: जब दम्पतीबीच सम्वाद हुन छा’ड्छ वा सम्वादको वातावरण बि’थोलिन्छ, तब स-साना अस’मझदारी बढ्छ । स-साना सम’स्याहरूको जन्म हुन्छ । त्यही सानो कुरा बिस्तारै हुर्कन्छ ।
यस्तो अवस्था आउँछ कि त्यसले श्रीमान्-श्रीमतीबीच शं’का–उपशं’का पैदा हुन्छ । त्यसपछि एकअर्कामा अस’मझदारी बढ्छ । मनमु’टाव हुन्छ। ठा’कठुक पर्छ । तपाईंलाई लाग्दो हो, जाबो फेसबुक चलाउँदैमा त्यस्तो हुन्छ र ?
निश्चय पनि फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम चलाउँदैमा त्यस्तो हुँदैन । तर ज’ड त्यही हो । जब तपाईंको लगाव सामाजिक सञ्जालमा बढ्न थाल्छ, तपाईं भ’र्चुअल सं’सारमा हरा’उन थाल्नुहुन्छ।
नयाँ-नयाँ स’म्बन्ध स्थापित हुन थाल्छ । नयाँ साथी-सर्कलमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। यसको सा’इड इ’फेक्ट के हुन्छ भने तपाईं वास्तविक ध’रातलमा रहन सक्नुहुन्न ।
घर व्यवहार के भइरहेको छ, बच्चाहरूको अवस्था के छ, विद्यालयमा के भइरहेको छ, बुबाआमाको स्वा’स्थ्यस्थिति के छ, विद्युत वा पानीको बिल बुझाइयो वा बुझाइएन यावत् कुरामा ग’डबडी हुन थाल्छ । यसै कुराले बिस्तारै तपाईंको पारिवारिक जीवनलाई गाँ’ठो पार्दै लान्छ । अन्तमा एउटा जा’लोमा फ’साइदिन्छ ।
सामाजिक सञ्जालमा हामी यति धेरै लि’प्त हुन थालेका छौं कि पारिवारिक मूल्य र मान्यताहरू ओ’झेल पर्न थालेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा लि’प्त भइरहँदा द’म्पतीबीचको सम्वाद टु’टेको छ।
स्वभावैले मानिसलाई रमाइलो गर्न मन लाग्छ । हातमा स्मा’र्टफोन हुँदा र फेसबुक चलाइरहँदा घरायसी कुरा गर्न कसरी जाँ’गर चल्छ ? हामी सजिलो खोज्छौं, रमाइलो खोज्छौं ।
त्यही कारण त श्रीमती–श्रीमान् एकै ठाउँमा भएर पनि नभएजस्तो हुन्छ । दुवैको उपस्थिति र सा’मिप्यता एकअर्काले मह’सुस नै गर्दैनन् । न उनीहरूबीच घरायसी कुराकानी हुन्छ । न प्रेमिल संवाद नै ।
यसरी सामाजिक सञ्जालमा फ’सेर दम्पतीले आसपी सम्बन्धमा ति’क्तता ल्याउँछ । अर्कोतिर सम’स्या ज’टिल छ । सामाजिक सञ्जालकै कारण अहिले सम्ब’न्धविच्छेदको घ’टना बढेको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा लि’प्त भएपछि घरको सामान्य कामधन्दा नै प्रभावित भएको छ । छोराछोरी बि’चल्लीमा परेका छन् । त्यति मात्र होइन, सामाजिक सञ्जालको फ’न्दामा परेर विवाहेतर सम्बन्ध स्थापित हुने आशं’का पनि प्रवल हुँदै गएको छ । क्षणिक रुपमा मनोरञ्जन लिने हेतुले जोडिएका कतिपय सम्बन्धहरू बिस्तारै ज’टिल अवस्थामा प्रवेश गरेको पाइन्छ ।
यसले अन्ततः दम्पतीबीच सं’शय पैदा गर्ने मात्र होइन, क’लहको बि’उ नै रोप्ने गरेका छन् । यसरी सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले दम्पतीमा वि’कृति भित्रिएको छ ।
कतिपय श्रीमान् श्रीमतीको झ’गडा सामाजिक सञ्जालकै नि’हुँमा हुने गर्छ । पासवर्डको विषयमा झगडा भएर दाम्पत्य सम्बन्ध टु’ट्न पुगेको घ’टना पनि समाजमा भेट्न सकिन्छ । अहिले दम्पतीबीचको सम्बन्धवि’च्छेदको घ’टना क’हाली लाग्दोगरी बढेको छ । त्यसमा एउटा प्रमुख कारण सामाजिक सञ्जाल भएको छ ।
भुटेको लसुनको फाइदा लसुनलाई भुटेर सेवन गरेमा विशेषगरी पुरुषका लागि निकै फलदायी साबित हुन्छ । लसुनलाई काँचै वा तरकारी र अचारको रुपमा प्रयोग गरिन्छ । लसुनमा सल्फरको मात्रा केही बढी हुन्छ भने ‘ऐ’लिसिन’ नामक तत्व पनि हुन्छ, जसले एन्टी–ब्या’क्टेरियल, एन्टी–फं’गल र एन्टी ओक्सिडेन्टजस्ता गुण उत्पादन गर्छ ।
एक अध्ययनले लसुनमा पाइने ‘फा’इटोकेमिकल्स’ तत्वले पुरुषको स्वा’स्थ्यलाई विशेष फाइदा गर्ने पत्ता लागेको छ । यस्तै, आयुर्वेदका चि’कित्सकले पुरुषलाई रातिमा भुटेको लसुनको एक पोटी खाने सल्लाह दिन्छन्, जान्नुहोस् यसले के–कस्ता फाइदा गर्छ ।